Nkọwa: Dezie Audio Site Na Transcript | Martech Zone
Tọzdee, Septemba 19, 2019 Tọzdee, Septemba 19, 2019 Douglas Karr
Ọ bụghị mgbe m na-enwe obi ụtọ banyere teknụzụ… mana Nkọwa amalitela ọrụ ntanetị nke Podcast nwere ụfọdụ atụmatụ na-akpali akpali n'ezie. Ihe kachasị mma, n’uche m, bụ ike idezi ọdịyo na enweghị ezigbo editọ ederede. Nkọwapụta na-ebugharị pọdkastị gị, na ike ịdezi pọdkastị gị site na idezi ederede!
Enwere m pọdkastị na-anụ ọkụ ọkụ kemgbe ọtụtụ afọ, mana m na-atụkarị ụjọ ịdezi pọdkastị m. N'ezie, ahapụwo m ụfọdụ ajụjụ ọnụ dị ịtụnanya daa n'akụkụ ụzọ mgbe ozi dị na pọdkastị na-echekwa oge… mana enweghị m oge iji dezie ma bipụta ya tupu oge a kara aka.
N'ezie, ọ bụrụ na mdekọ pọdkit nke nkeji iri anọ na ise, ọ na-ewe otu elekere ma ọ bụ ọbụlagodi awa abụọ iji dezie ndekọ a, tinye intros na outros, ziga ya maka ndetu ya, ma bipụta ya n'ịntanetị Ọ fọrọ nke nta ka ụjọ tụwa m mgbe rekọd ole na ole kwadoro m. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụ usoro dị irè ma enwere m nnukwu ndị na-ege ntị na ọ dị m mkpa ịga n'ihu na-aga n'ihu.
Nkọwapụta abụghị naanị onye editọ, ọ bụ nyiwe Podcast na Video Studio niile. Otu ikike ọzọ na-adọrọ adọrọ bụ ikike ịtinye okwu ị na-ekwukarịghị iji ha Nyefee atụmatụ!
Akụkụ nke nkọwa
Leadinglọ ọrụ na-eduga transcription - Descript mmekọ na ihe ndị kasị ezi transcript na-eweta iji jide n'aka na ị na-mgbe niile na-kacha mma transcription si n'ebe.
Dezie ọdịyo ma ọ bụ vidiyo site na ịdezi ederede - Dọrọ na dobe iji tinye egwu na nsonaazụ ụda. Enwere ike ibupụ vidiyo na Final Cut Pro ma ọ bụ Premiere.
jiri Oge nchịkọta akụkọ maka nhazi nke ọma na fades na ndezi olu.
Ndụ Imekọrịta - Real oge multiuser edezi na-aza ajụjụ
Ndekọ ọtụtụ ihe - Nkọwapụta na - ewepụta otu ihe ederede
Nyefee - Dezie olu gị site na ịpị ihe naanị. Kwadoro site na Lyrebird Ai
Mmekọrịta - Via Zapier, ị nwere ike jikọọ nkọwapụta ọtụtụ narị ngwa weebụ kachasị ewu ewu.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ isonye na Deseta Beta, ị nwere ike itinye ebe a:
Nkọwapụta Beta Mmemme
Okpu n'ọnụ na-akwanyere ùgwù ibe Brad Shoemaker na Creative Zombie slọ nka maka ịchọta!
Tags: adobe final cut proadobe premiereaiAmamịghe echicheaudionchịkọta akụkọnkọwakọwaa studio PodcastugbalaLyrebird AiVidio Ahịanchịkọta akụkọPodcast studiopremierentụgharị vidiyo
Iterable: A Cross-Channel Uto Marketing Platform